एक जोडि जंगल मा एस्तो कार्या गर्दा गर्दै पक्राउ ! भिडियो भयो भाईरल,,, कृपया हेर्न नछुटाउनु होल (भिडियो सहित) – Jagaran Nepal
एक जोडि जंगल मा एस्तो कार्या गर्दा गर्दै पक्राउ ! भिडियो भयो भाईरल,,, कृपया हेर्न नछुटाउनु होल (भिडियो सहित)
भिडियो अन्तिम मा छ….शिक्षाको दायरा यो इक्कीसौं शताब्दीका पुस्तकहरूमा मात्र सीमित छैन। धेरै परिवर्तन गरीएको छ र सिकाई प्रक्रिया सजिलो बनाएर अन्वेषण गरिएको छ। इन्टरनेट को जादू वास्तव मा संसार परिवर्तन भएको छ, साथ यो अनलाइन साइटहरु र वेब पृष्ठहरु को प्रभाव आउँछ। राम्रो ब्लग र साइटहरू दोस्रो पुस्तक हो जहाँबाट हामी बढि जान्छौं, हामी त्यो चीज जान्छौं, जुन हामीले अहिले सम्म सिकेका छैनौं वा सुनेका छैनौं।
अन्य राम्रो साइटहरू जस्तै, ओन्नेप। चाखलाग्दो, नयाँ र अनुपम लेखहरू प्रकाशित गर्दछ। हामी पनि अद्वितीय भिडियो समाचार, डिजिटल मार्केटिंग मा आधारित लेख, खेलकुद समाचार र अधिक धेरै प्रकाशित। हाम्रो मुख्य अभिप्राय दर्शकहरूलाई नयाँ र अनुपम सामग्री साझा गर्नु हो। मुख्य रूपमा Onnep ले टेक, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लगिंग र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपयोगी लेखहरू साझा गर्नु हो।सामान्य जस्तो आज हामी यहाँबाट छोटो फिल्म प्रस्तुत गर्दैछौंntxhwham च्यानल। यो चलचित्रले हाम्रो समाजमा के भइरहेको छ देखाउँदछ। चलचित्रले गाउँका युवाहरूले कसरी प्रेमलाई आउटडोर बनाउन प्रयास गर्दछ देखाउँदछ।
दोलखास्थित भिमेश्वरको शिलामा पसिना निस्किएको छ । आज बिहान ६ बजेर २८ मिनेटमा भिमेश्वर मन्दिरको मुख्य शिलामा पसिना देखिएको स्थानीयले बताएका छन् ।भिमेश्वरको मुर्तिमा पसिना आउनुलाई देशमा अनिष्ट हुने संकेतका रुपमा लिइने गरेको छ ।यस अघि २००७, २०४६, सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०६२,६३ को जनआान्दोलन, दरबार हत्याकाण्ड, १९९० सालको महाभूकम्प, २०७२ को महाभूकम्प लगायत अनिष्ट हुनु अघि पनि यो शिलाबाट पसिना आएको त्यहाँका पुजारीहरुले बताएका छन् ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) –समाजसेवा तथा राजनिती गर्नेहरुले आज जनताको समर्थन पाउने तथा प्रतिपर्धिहरुलाई सजिलै हराउँन सक्नेछन् । समस्याका पर्खालहरु बिस्तारै ढल्दै जाने तथा सत्रु परास्त हुनेछन् । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ । सुन्दर पहिरनमा सजिएर अरुको मन आफुतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ भने सुन्दर तथा बिलाशि बस्तुहरुको उपभोग गर्न पाईने हुँनाले मन प्रशन्न हुनेछ । तरपनि वाहिरी वातावरणको प्रभावले स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।भिडियो